360 ဒီဂရီချိန်ညှိနိုင်သော Air Vent Mount Ugreen ကားဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မစီးပါ။ | WoopShop®
360 ဒီဂရီညှိနိုင်သော Air Vent Mount Ugreen Car Phone Holder
အရောင် Grey က Black က အဆင့်မြှင့်အနက်ရောင် အမှောင် Grey က
တရုတ် / မီးခိုးရောင် တရုတ် / Black က တရုတ် / အဆင့်မြှင့်အနက်ရောင် တရုတ် / မီးခိုးရောင်
360 ဒီဂရီချိန်ညှိနိုင်သော Air Vent Mount Ugreen ကားဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ - China / Grey backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Phone ကိုင်သူ၊ ဖုန်းရပ်နားသူ၊ ကားဖုန်းကိုင်သူ၊
compatibility: 3.5-7 လက်မဖုန်းအတွက် fit;အများဆုံးလေဝင်လေထွက်တောင်ပေါ်အဘို့အ fit
feature ကို: 360 ဒီဂရီချိန်ညှိကိုင်ဆောင်သူ
မုဒ်: အလျားလိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက် mode ကိုထောကျပံ့
Спасибобольшое, всепришлооченьбыстро ငါအကြံပြုသည်။
Отличноекачество။ LADA VESTA နှင့် Redmi note7တို့အတွက်အမှတ်တရပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
Каквсегда, качествотоваранавысоте !!! Супербыстраядоставка! Заказали 15.02, а 02.03 မပျောက်ပါ!